Harena an-kibon’ny tany : nijery ny vahaolana i Alemaina sy i Madagasikara | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany : nijery ny vahaolana i Alemaina sy i Madagasikara
Par Taratra sur 03/10/2017
Nitsidika ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Zafilahy Ying Vah, omaly teny Ampandrianomby, ny delegasiona alema notarihin’i Gunter Nooke, i Christiane Kraus, ary ny masoivoho eto amintsika, i Harald Gehrig. Nanatevina izany delegasiona izany ny solontenan’ny GIZ. Nifampidinihan’izy ireo ny mahakasika ny fitrandrahana madinika sy vaventy, ny olana misy sy ny vahaolana, hanatsarana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ao anatin’izany ny fanajana ny tontolo iainana.
Tsy azo lavina fa misy ny kolikoly ao amin’io sehatra io, koa ezahina ny hanafoanana izany hahafahana mandroso, tokony hahazoan’ny mponina eny ifotony tombontsoa misy izany fitrandrahana izany. Ny minisitera rahateo, manana ny fanamby hoe « fitrandrahana mampidi-bola ».
Notsiahivin’ny minisitra fa hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantena, sambany eto Madagasikara no tafakatra roa taonina ny volamena nambara ara-dalàna. Ezaka tsara izany ary hirariana ny mbola hitohizany hahafahana mitsinjo sy mampandroso eny ifotony, nipoiran’ireo harena ireo. Marihina fa ny 30 septambra lasa teo, nanatanteraka fitsidihana tao amin’ny orinasa Ambatovy i Gunter Nooke.